Dahab Shiil wuxuu la mid yahay Bankiyada Caalamiga ah ee Adduunka | Jubbaland Media Online
Dahab Shiil wuxuu la mid yahay Bankiyada Caalamiga ah ee Adduunka
Posted on March 1, 2016 in Opinions // 0 Comments
Daahir Maxamed Sheekh
Beryahan danbe waxa dhacdey in Dagaal aad u xun lugu hayo ee Bankiga Caalamiga ah ee Dahab Shiil taaso ka danbeeysa in la diidan yahay Horumarka ay sameeysey Bankiga Dahab Shiil ayadoo Warar been ah iyo aflagaado loo geysto mar walba.
Cadceed Duhurka taagan ma daboosho Gacantu ee Dahab Shiil waa sidaas ee mid ogow Bankiga Dahab shiil waxa leh Soomaali oo dhan ee wax shaqo ah kuma laha arrimaha Siyaasadda iyo Amniga ee Soomaaliya.
Dahab shiil wuxuu la mid yahay Bankiyada Caalamiga ah ee Aduunka oo dhan ka jira laakiin waxaa ceeb ah in warar been abuur ah laga sameeyo oo waliba la yirahdo; Soomaaliya Waxa ay ka degi la’ dahay Waa Dahab Shiil.
Baaris dheer ka dib waxaan ogaadey in la diidan yahay in ay Soomaaliya ay yeelato dhowr Bank oo Caalami ah oo ugu horeeyso Dahab Shiil laakiin Taas ma dhici doonto Insha Allah Soomaaliya Horumar bay gaareysa Dhinac walba leh oo ugu horeeyso dhanka Bankiyo Badan oo ay yeelato.
Dahab Shiil wuxu ka shaqeeya Horumarka Shacbiga Soomaaliyeed meel kaste ay Jooggan hase yeeshe Shacbiga Soomaaliyeed waxay garab taagan yihiin oo weliba ay difaacayan Hantidooda oo ah Dahab shiil, Amal, Mustaqbal, Amaano, Kaah, Iftin, Tawakal , Hodan Global iyo kuwa kale oo badan oo Bankiyo ah oo Soomaali leedahay.
Wadamada reer Galbeedka ah Sida Mareykan iyo Reer yurub waxay og yihiin in ay Dahab shiil tahay Banki Caalami ah oo wax danbi ah laheyn oo weliba aysan wax shaqo ah ku laheyn dhibaatada Soomaaliya ka jirta maxa yeeley Dahab shiil ma ahan Xisbi ama urur siyaasadeed ama hay, ad ku shaqo leh Amniga Soomaaliya.
Qof kaste oo war been ah oo lid ku ah Dahab Shiil u gudbiya reer Galbeedka ee waxaad ogaata in aad is ceebeysey oo weliba aad cadow ku tahay Horumarka Shacbiga Soomaaliyeed meel kaste ay jooggan tan kale Reer Galbeedka waxay ku arki doonaan in aad tahay Qof been badan oo warkiisa qiimo laheyn.
Fadlan iska dhaaf wararka beenta ah ee aad ka gudbineysid ama aad ka faafineyso Bankiyada Caalamiga ee Soomaalidu leedahay oo ay ka mid tahay; Dahab Shiil, Amal, Mustaqbal, Amaano, Kaah, Iftin, Tawakal, Hodan Global iyo kuwa la midka ah
FIIRO GAAR AH: Aniga Dalkeyga iyo Shacbigayga Soomaaliyeed waan jeclahay waxana ka soo Horjeeda in mar walba laga Sheego warar been abuur ah oo lid ku ah Dalka iyo Dadka Soomaaliyeed.
W/Q: Mr. Dahir Mohammed Sheikh